သင့် ဦး နှောက်အားပြန်လည်လည်ပတ်စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်အတွက်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်။
ဦးနှောက်ပလပ်စတစ်: ဒါဟာဆိုတာဘာလဲ by ကလေးတွေကအဘို့အ neuroscience
-Norman Doidge, MD အပေါ် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Neuroplasticity အရောင်းရဆုံးစာအုပ်မှ“ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်"
သုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို sensitive က desensitization နှင့် hypofrontality ဖုံးအုပ် NIDA, နိုရာ Volkow ၏ဦးခေါင်းကနေ
Flashbacks နှင့်တဏှာနှင့်အတူဖြေရှင်းဘို့ techniques
Rewiring နှင့် unwiring neuroplasticity သို့မဟုတ်ဦးနှောက် plasticity ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Neuroplasticity အသစ်သောအတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးအာရုံကြောလမ်းကြောင်းပွနျလညျဖှဲ့စညျးဖို့ဦးနှောက်၏ရာသက်ပန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ Neuroplasticity ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတည်းအမျိုးအစားထားရှိရေး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးချင်းရဲ့တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးပေါ်ပေါက်ကြောင်းအတော်ကြာအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည်ပါဘူး။ ဘရိုင်ယန် plasticity မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်အပေါ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လည်းပါဝင်သည် (သို့သော်ကန့်သတ်သည်မဟုတ်):
ကိုတိုးပှားသို့မဟုတ်ဆှဲ (အဖြူကိစ္စ) တွင်လျော့ကျ: အာရုံကြောများ၏မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့အာရုံကြောအမျှင်မျက်နှာဖုံးများ။
ကိုတိုးပှားသို့မဟုတ် dendrites အရေအတွက် (မီးခိုးရောင်ကိစ္စ) တွင်လျော့ကျ: အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို communicate ရှိရာအဲဒီဌာနခှဲကကဲ့သို့အမျှင်ဖြစ်ကြသည်။
synapses အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်း - လမ်းကြောင်းများ၏အင်အား၊ အချက်အလက်စီးဆင်းမှု၊ သင်ယူမှုနှင့်အမှတ်တရများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။
ကိုတိုးပှားတစ်ခုသို့မဟုတ် synapses ၏အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ချ: အထက်တွင်အဖြစ်အတူတူပါပဲ
သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်စေသည့်ယန္တရားများ
အထက်ပါယန္တရားများသည် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ သင်ယူမှု၊ မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့တွင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Neuroplasticity သည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းသောဆက်သွယ်မှုများကိုအားပျော့စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသောပုံစံတွင်အဓိကစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများတွင် -
Desensitization: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောဆားကစ်၏အားနည်းစေ (စသည်တို့ကိုဥပမာအစားအစာ, လိင်,)
အသိ: အဆိုပါစွဲနှင့်ဆက်စပ်သော Pavlovian မှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း
ပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ: CRF, Amygdala နှင့် HPA ဝင်ရိုး
“ ဒါကဒီဟာကိုငါနောက်ဆုံးလုပ်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ငါပြီးပြီ။ ငါпорноကိုမကြိုက်ပေမဲ့ငါနင့်အမြင့်ဆုံးကိုကြိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါ (အရမ်းနောက်ကျလွန်းလို့စို့လာတယ်) အခုအချိန်မှာငါကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာအားလုံးထက်ပိုကောင်းတယ်။
hypofrontality, အာရုံခံစားမှုနှင့် desensitization: အဆိုပါအထက်အတိုကိုးကားစှဲမှာတွေ့ရတဲ့အဓိက neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများသုံးလွှမ်းခြုံ။
"ငါသည် porn မကြိုက်ဘူး" နှင့် "နောက်မှသူကစို့" ရောင်ပြန်ဟပ် hypofrontality။ သူ၏ပိုမိုဆင်ခြင်တုံတရားရှိသော front cortex သည်ညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်နာလန်ထူလိုပြီး porn မူးယစ်ဆေးစွဲပြီးနောက် crap ကဲ့သို့ခံစားရမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ hypofrontality နှင့်အတူ, တိုကျရိုကျ cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်လည်ပတ်မှုကျဆင်းခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချ။ ယခုရေရှည်ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကာလတိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအကြားတိုက်ပွဲ၌အပြာရုပ်ကိုကြည့်ရှုရန်တိုက်တွန်းခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ဤတိုက်ပွဲတွင်အနိုင်ရသည်။
"ငါမွငျ့မားနဦးကြိုက်"နှင့်"ငါယခုကြုံတွေ့နေတာပါအရာအားလုံးထက်ပိုကောင်းတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ် ာင်း။ porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စွဲလမ်းကြောင်းယခုအကျိုးကို circuit ကိုသက်ဝင်စေဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းရှိပါတယ်။
"အရာကဒီအချက်မှာငါအခုကြုံနေရတာအားလုံးထက်သာ။ ကောင်း၏"ကြောင့်ဖြစ်သည် desensitization။ အနိမျ့ dopamine နဲ့ dopamine (D2) receptors ဘယ်နေရာမှာအနီးရှိသူသည်အရာမှအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအဖြစ်လှုံ့ဆော်အဖြစ်, သဘာဝဆုလာဘ်ပျင်းစရာကောင်းပါစေ ထိခိုက်.
စွဲလမ်း၏အဓိက sensitization သလဲ?
ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများတွင် sensitization (hyper-reactivity cues) သည်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများတွင်ပါသော်လည်းကြည့်ရှုသူအများစုကမျှော်လင့်ကြသည် desensitization (က dopamine နဲ့ opioids အတွက်ကျဆင်းခြင်း, သူတို့၏ receptors) ကိုအဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲအဖြစ်။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းများစွာသောသုတေသီများအမှန်တကယ်ရှုမြင် ာင်း compulsive စားသုံးမှုမှ ဦး ဆောင်သောအဓိကပြောင်းလဲမှုအဖြစ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, အဆုံးမှတ်စွဲလမ်း -related ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအကျွမ်းတဝင်ကြယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စွဲဝေါဟာရများရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ Desensitization အားလုံးအပျြောအပါးမှတုံ့ပြန်မှု၏တစ် ဦး ယေဘုယျခေါ်ဆိုခြင်း ... အခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အသိ Hyper-reactivity ကို / ရည်ညွှန်းစိတ်လှုပ်ရှား-ပေမယ့် သာ တိကျသောတုံ့ပြန်၌သင်တို့၏စွဲလမ်းနှင့်အတူသင့်ဦးနှောက်အပေါင်းအသင်းတွေကို။
အဲဒီနှစျခု neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုပြောနိုင်ခဲ့လျှင်, desensitization “ စိတ်ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဘူး” (dopamine နိမ့်အချက်ပြမှု) သည်ညည်းတွားနေလိမ့်မည် ာင်း မင်းကိုနံရိုးတွေပေါ်မှာလှောင်ပြောင်နေလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့မင်းဟာမင်းလိုချင်တာကိုရပြီ။ ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းကမင်းလိုချင်တာကိုရတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤနှစ်ဖက်စလုံးယန္တရားသည်သင်၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုသည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်နှင့်တင်ပြသည့်အခါစိတ်အားထက်သန်မှုနည်းသည်။
သင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးသင်၏ dopamine အချက်ပြမှုကိုသင့်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပေးပေလိမ့်မည်။ သို့သော်အထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အားနည်းသွားနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အနှစ် ၂၀ ကြာသမ္မာသတိ ရှိ၍ အရက်ကိုသောက်သုံးသူသည်ဘီယာကြော်ငြာများကြောင့်အစပြုမခံရတော့ပေ။ သူကဘီယာတစ်ခွက်သောက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီးထိန်းချုပ်မှုနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ယခင်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်သောသူများကိုကြာမြင့်စွာသတိရရန်လိုအပ်သည်။
တစ်နည်းမှာစွဲသင့်ဦးနှောက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းဖန်တီးထားပါတယ်, အခြေခံအားဖြင့်အမှတ်တရများ, ကြိုတင်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အရာကမဆိုအလွယ်တကူသက်ဝင်နိုင်သည် (ပုံများ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းစသည်) ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် - အထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများ၏ activation သည်တူညီသည်။ မတရားသော။
“ တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အပြည့်အဝမထနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဆိုက်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါငါရရှိခဲ့တဲ့အလုအယက်ပြင်းထန်မှုကိုမယုံနိုင်ဘူး! အလွန်အစွမ်းထက်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှု - tingling, ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပင်တုန်ခါခြင်း။ ကျွန်တော်သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အင်္ကျီကိုမမျှော်လင့်ဘဲကြည့်ရှုမိသည်နှင့်အမျှထိုသို့သောအလျင်စလိုမျိုးမခံစားမိပါ!”
ဒါကြောင့်ပုံမှန်အပျော်အပါးကိုတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေတဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ sensitization ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုလွမ်းနေပြီလဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ sensitization ဟာအလွန်အမင်းလုပ်တဲ့အလွန် ဦး နှောက်ယန္တရားနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ရေရှည်အလားအလာ အဆိုပါအရာ (LTP), synapses ၏အားပေးနှင့် ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ synapses ၏အားနည်းသောအရာ (, LTD) ။
ရေရှည်အလားအလာ (LTP) ၏အခြေခံဖြစ်ပါသည် သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်။ ၎င်းကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။အတူတူပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုအတူတကွဝါယာကြိုး။"အမှတ်တရများအဆင့်နှစ်ခုအတွက်ပေါ်ထွန်း။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ဆုချီးမြှင့်ခြင်းတိုက်နယ်က dopamine ကိုသင့်ဆီသို့ပို့ခြင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံသည်အရေးကြီးကြောင်းပြနေသည် prefrontal cortex (PFC) ။ ပိုအရေးကြီးပုံကိုသင့်ဦးနှောက်တစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုပူးတွဲပို dopamine ။
ဒုတိယအချက်မှာ PFC ကသင်၏ "ဤအရာသည်အရေးကြီးသည်" ကိုတုံ့ပြန်သည်။ (1) ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်အချက်ပြခြင်းနှင့် (၂) အာရုံကြောတုန့်ပြန်မှုကွင်းဆက်အားဆုိုင်ရာတိုက်နယ်သို့ပြန်သွားသည်။ ထို့နောက်၎င်းအထူးဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်သောအတွေး၊ မှတ်ဉာဏ် (သို့) သတိပေးချက်သည်လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီးသင်၏ဆုိုင်ရာအားတိုက်နယ်ကိုဆူညံသံဖြစ်စေသည်။ ဒါဟာသင်အကြိုက်ဆုံးဘာဂါပူးတွဲနှင့်ဆက်စပ်သောအနံ့ဖြစ်နိုင်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါတစ်ကောင်အနေဖြင့်ခြံစည်းရိုးအတွင်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ငှက်တစ်ကောင်အတွက်ငှက်ဖျားကိုဖြည့်ပေးတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်က၊ လိင်၊ အစားအစာနှင့်ကျောက် 'n' လိပ်များ၏မည်သူ၊ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့မည်ပုံကိုမှတ်မိရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးတာက, အ တုံ့ပြန်ချက် dopamine ပေါ်မှာကွင်းဆက်မလုပ်ပါဘူး အဲဒါပြေးပါတယ် အချိုမှု။ အာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်“ Go get it!” ကိုလုပ်ဆောင်ရန်စွမ်းအားရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အချက်ပြမှုများ။ အချိုမှုဆွ ညစ်ညမ်းနေဆဲသင်တို့၏အကျိုး circuitry dopamine နဲ့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်တုံ့ပြန်ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်အချိန်မှာတောင်သင့်ရဲ့ဆွဲလဲမြည်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်ဆားကစ် (dopamine) → PFC (အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်) တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်→ (အချိုမှု) circuit ကိုဆုချဖို့။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ပုံမှန်အတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အသိမြှသို့သော်တစ်ဦးသို့ဆုလာဘ် circuitry ဤသာမန် PFC →အချိုမှုတုံ့ပြန်ချက်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲ စူပါမှတ်ဉာဏ် သုံးခြေလှမ်းများအတွက်:
ာင်းနှင့်အတူ, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမှတ်တရများ (ထိုကဲ့သို့သောသင်ယူမှုအချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့) အဖြစ်လူသိများနေသောအလေ့အထများ, အသွင်ပြောင်း သွယ်ဝိုက် အမှတ်တရများ။ ဥပမာ: စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့။ စွဲ-related သွယ်ဝိုက်အမှတ်တရများ Pavlovian သည်စတီးရွိုက်ဆေးများနှင့်တူသည် - လျစ်လျူရှုရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ မကြာသေးမီကသမ္မာသတိ ရှိ၍ အရက်သမားတစ် ဦး သည်ဘားတစ်ခုအတွင်းလမ်းလျှောက်သွားသောအခါဘီယာ၏ရယ်မောသံများနှင့်အနံ့များအားလုံးသည်ဤအာရုံခံကိရိယာကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးပြင်းထန်သောတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
LTP သည်တုန့်ပြန်မှုလမ်းကြောင်းကိုခိုင်မာစေသဖြင့် glutamate သည် squirt အနည်းငယ်သည်သင်လိုအပ်သောအာရုံကြောဆဲလ်များကိုပစ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤ အခု!” အာရုံခံလမ်းကြောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြသည် Non-dopamine ယန္တရား ဆုလာဘ် - circuitry အာရုံခံ - ကိုသက်ဝင်ဘို့ငရဲသို့မဟုတ်မြင့်မားသောရေလာကြ၏။ ဒီ sneaky အင်္ဂါရပ်အားလုံးဖြည့်စွက်ခြင်း၏အဓိကမှာဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဓိက dopamine အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကသင့်ကိုစစ်မှန်သောလိင်မှပျော်ရွှင်မှုမခံစားရစေရန်တားဆီးပေးပါသလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အိမ်ပြန်ရန်သင်၌အခြားနည်းလမ်းရှိသေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ယာဉ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းကိုသာ (ခွင့်ပြုသည်) - PORN ကိုခွင့်ပြုသည်။
ဆက်သင်၏အစွဲ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်မြှင့်လုပ်ဆောင် တတိယ အဆိုပါ sensitization လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ယန္တရား: ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (LTD) ။ အဆိုပါဆု circuitry ရဲ့ပင်ဘရိတ်စနစ် (ဂါဘမြို့သား) အားနည်းသွားပြီးထပ်မံချဲ့ထွင်သည်။ အချိုမှုဆိုင်ရာအချက်ပြမှု။ ပုံမှန် ဦး နှောက်လည်ပတ်မှုအစား၊ လမ်းဆုံတိုင်းမှာယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကိုသင်စစ်ဆေးသည့်မြို့မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်၊ autobahn။ မရှိအသွားအလာအလင်းအိမ်ဖြစ်ကြပြီးညစ်ညမ်းလမ်းပေါ်တွင်သာ BMW ကားက M-5 ဖြစ်ပါတယ်။
autopilot အရာကကျုပ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းသောနတ်ဆိုးစွဲခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့နောက်သင်ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အစစ်အမှန်သည်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးငရဲဘာဖြစ်သွားသည်၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများကိုသင်ဤအချိန်တစ်ချိန်လုံးအဘယ်ကြောင့်ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုအံ့သြသွားသည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲသကဲ့သို့လိင် / အစားအစာများအတွက်တူညီမာစတာ switch ကို
ဤအစွဲ-related အပြောင်းအလဲများအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အဆိုပါမာစတာ switch သည်ပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည် DeltaFosB။ ၏စားသုံးမှုမြင့်မား သဘာဝကဆုလာဘ် (လိင်, သကြား, High-အဆီ) သို့မဟုတ်အကျိုးကိုစင်တာများတွင်စုပြုံမှအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းမရှိ DeltaFosB ၏နီးပါးမည်သည့်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှု။
သူတို့ချီးမြှင့်သောကြောင့်, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများသာစွဲလမ်းစေသတိပြုပါသို့မဟုတ်ယန္တရားများတားစီး ရှိပြီးသားသဘာဝကဆုလာဘ်အဘို့အရာဌာန၌။ စွဲလမ်းဆေးပညာ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ပြီးသတ်တယ်အစားအစာနှင့်လိင်စွဲလမ်းစစ်မှန်တဲ့စှဲဖြစ်ကြောင်းဤသို့ဖော်ပြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
DeltaFosB စွဲစတင်, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်ကြောင့်ရေရှည်တည်တံ့စေရန်ကူညီပေးသည်သာ။ သင်အသုံးပြုနေတဲ့ရပ်တန့်ပြီးနောက်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်, relapse ပိုပြီးအောင်, တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့အလှည့်ပတ်ဆွဲထားတဲ့။ ထို့ပြင်ထိခိုက်အမှတ်တရများ (နှင့်ဆက်စပ်နေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို) ကအချိန်အမည်မသိငွေပမာဏအဘို့အရစ်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တိုတောင်းခုနှစ်, porn တွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဘို့သင့်ကိုမီးလင်းစေနိုင်သည်။
စွဲ neuroplasticity အဖြစ်အကျဉ်းချုပ်ခံရနိုင်သည် synapses အတွက်ဆက်လက်စားသုံးမှု→ DeltaFosB →မျိုးဗီဇ၏ activation →အပြောင်းအလဲများကို→ထိခိုက်စေ desensitization။ မြင် အဆိုပါစွဲဦးနှောက် အသေးစိတ်အတွက် ပုံရသည် desensitization နောက်ဆုံးမှာဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု (hypofrontality), စှဲနောက်ထပ်အဓိကအင်္ဂါရပ်များဆုံးရှုံးမှုရန်။
porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Sensitized လမ်းကြောင်းများနှင့်ဆုတ်ခွာ ... ugh
သငျသညျအဆုံးစွန်သောယဇျပူဇျောစေခြင်းနှင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့ ခဏလောက်ပုပ်နေလိမ့်မယ် သတိရပါ၊ သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင်၏အကြီးအကျယ်ညစ်ညမ်းမှုကိုအများအားဖြင့်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်ရိပ်မိခဲ့သည်။ သင်ကအထွတ်အထိပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကလေးမွေးနေသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သင်မှတ်မိနိုင်အောင် super-memory အလိုမရှိ သင်၏ "တန်ဖိုးရှိသော" အလှအပများ၏ bevy (သို့မဟုတ်သင်အထွတ်အထိပ်ခဲ့သမျှ) ကိုစွန့်လွှတ်။
အခုဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ပြီးသား, ရှောင်ခြင်းဖြင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုအန်တုအဖြစ် ပေါက်မှအနိမ့် dopamine / sensitivity ကို နောက်ထပ်။ ဒါ့အပြင်လိင်စိတ်-squelching ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း CRF နှင့် norepinephrine ထရိုက်။ သင့်ရဲ့ desensitization overdrive ၌တည်ရှိ၏, ဒါကြောင့်တကယ့်မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းမခံမရပ်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါအရှိဆုံးယောက်ျားတွေထိုကဲ့သို့သောတွေ့ကြုံခံစား ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ။ သူတို့ခံစားနေရတယ် နည်းသော ပုံမှန်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အစဉ်အထက်အပျော်အပါး, ခံစားချက် နောက်ထပ် စိုးရိမျ, နှင့် နေဆဲမိမိတို့အကျိုးကို circuitry goose နိုငျသောတစျခုအရာဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ စှဲရိုက်ပုတ်ဒါခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်အစိုင်အခဲဇီဝကမ္မအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။
ပိုဆိုးသည်မှာ, abstinence စဉ်အတွင်း sensitized "goosing" လမ်းကြောင်း ပင်အားကောင်းကြီးထွား။ သင်၏ပျော်ရွှင်မှုစင်တာသည်နှိုးဆွရန်အော်ဟစ်နေသည့်အလား…သို့သော်စွဲလမ်းမှသာဖုန်းခေါ်သံကိုကြားနိုင်သည်။ အာရုံနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကို processing အာရုံကြောဆဲလ်အပေါ်အကိုင်းအခက် (dendrites) "စူပါ spiny" ဖြစ်လာသည်။ nubs အနည်းငယ်တိုးများလာခြင်းသည် synaptic connection များနှင့်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းစေသည်။ “ Spinal Tap” ဖျော်ဖြေပွဲမှာနားနေစဉ်နားရွက်အပို ၄ ခုကြီးထွားလာတာနဲ့တူတယ်။ သင့်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကို cues (သို့) အတွေးများ (glutamate) ကရိုက်လိုက်သောအခါတဏှာစကေးသည်တစ်ဆယ့်တစ်ဆယ့်ခြောက်အထိရှိသည်။
ငါကြော်ငြာနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအတွက်ကျပန်းရုပ်ပုံများကိုသာတပ်မက်ခြင်းစိတ်ကိုချွတ်ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိတာပါ။ မော်ဒယ်များအပြည့်အ ၀ ဝတ်ထားရင်တောင်ငါတကယ်အရှုံးပေးချင်တယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်နေစဉ် (သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်း) စစ်မှန်သော libido အတွက်အသက်ဝင်စေတဲ့ sensitized လမ်းကြောင်းကိုအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။ သငျသညျပုံမှန်အစွန်းရောက်တွေ့ကြုံခံစားလျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည် လိင်စိတ်အတွက် drop သင့်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တစ်ချိန်ချိန်။ ဤ“ ပြားချပ်ချပ်” အဆင့်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သင့်ကိုမီးစွဲလောင်စေနိုင်ပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်စိုက်ထူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤသည်ကသင့်အားညစ်ညမ်းရုပ်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်စေနိုင်သည် ကုမ သင့်ရဲ့နှေးကွေးလိင်စိတ်သည်။
အစစ်အမှန်ရောဂါပျောက်ကင်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အသစ်ရဲ့ဦးတည်ချက်အတူတက်ဖမ်းရန်သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာအဆောက်အဦများအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်း, သင့်မိတ်ဖက်အပါအဝင်ရှိသမျှသည်အခြားသောလှုံ့ဆော်မှု, လျော့နည်း arousal ဖြစ်ကြသည်။
နှစ်လကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုတွင်ရှင်းလင်းသောမြည်းတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ဘုရားသခင်အားရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ထိုးသွင်းမိသလိုခံစားရတယ် ငါပြန်ထားရန်, ငါ့လိင်တံနှင့်ငါ့စိတ်၌အကြီးမားဆုံးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ငါစာသားအပေါ်ထပ်သို့ပွေးသွားသည်။ ငါအောက်ထပ်မှာနေခဲ့ရင်ငါ ၁၀၀% ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်။ ငါ "ဘာလဲလူငယျ?" သွားငါ့ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခံစားရနိုင် ပြန်သွား !!!!!!!!! သွားပါ။ ငါလှုပ်နေတယ်။ ၈ မိနစ်ကျွန်တော်သွားတွေကိုမရပ်မနားနုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
ဦး နှောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးနေ့စဉ်အပျော်အပါးတွေကပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့စွမ်းအားကကြီးမားပေမယ့်အာရုံခံနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနောက်ဆုံးမှာချုပ်ကိုင်မှုပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ pixels ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကအထိခိုက်မခံတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအားနည်းစေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအခြားအလားအလာရှိတဲ့ဆုလာဘ်များ (အစစ်အမှန်ပါတနာများကဲ့သို့) နဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းများကိုပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။
ဒီနေရာမှာယောက်ျားတွေဤပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့ခံစားရဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်။ porn / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရှောင်ရှား၏သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးခက်ခဲတဲ့ဆုတ်ခွာအဆင့်နှင့်တစ်ဦးတစ်လ (သို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာ) မှတဆင့်ခဲ့ကြပြီစိတ်ကိုထားပါ။
Guy ၁) နောက်ဆုံးမှာတော့ငါက porn အချို့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကကျွန်မကပြန်ပြောပြတာနဲ့တူတူပဲ။ အနှစ်သက်ဆုံးမြင်ကွင်းများကိုရှာဖွေခြင်းပင်မအောင်မြင်ပါ porn အချို့လမ်းအတွက်ပျင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမှတ်မိသလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်ငါပြန်ဆွဲနေတုန်းပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ငါမှတ်မိသလောက်မများလှသဖြင့်ပြန်သွားရန်မလွယ်ကူပါ။
Guy 2) တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေနေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဤအရာသည်ဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောအမှိုက်များ (အမှတ်တရများ၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာများ) သွားသောနေရာတစ်ခုရှိသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငြင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရတယ်။ လိုပဲမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကသဘောပေါက်လာတယ်။ ခင်ဗျားလက်ခုပ်တီးတာနဲ့တူတယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကလက်တွေကြားမှာတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်လေကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။
သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
အဆိုပါ rewiring လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်ကသင်၏ခိုင်မာရေးကပါဝင်ပတ်သက် အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု, (သင့်နဖူးနောက်ကွယ်မှ) သင့် prefrontal cortex နေထိုင်ရသော။ , အန္တရာယ်အကဲဖြတ်တာဝေးပစ်အစီအစဉ်များကိုအောင်နှင့် Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ထားသည့် prefrontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါသည်။ ဝေါဟာရ hypofrontality စှဲသောဤ Self-ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်အားနည်းခြင်းနှင့်တားစီးကိုဘယ်လိုဖော်ပြသည့်အခါမကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဤဆားကစ်ပြန်သွားအချိန်နှင့်ကိုက်ညီမှုကြာပါသည်။
စွဲလမ်းအတွက် Hypofrontality - စွဲလမ်းကျွမ်းကျင်သူမှငါးမိနစ်ကြာဗီဒီယိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းကျုံ့ဦးနှောက်: Porn အသုံးပြုသူများအဘို့အနိမိတျဆိုးသတင်းများ - စိတ်ပညာယနေ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်
NIDA ခေါင်းဆောင်၏သုတေသနသုံးသပ်ချက်နှစ်ခု မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ Neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ Cortex များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်အထောက်အထား Neuroimaging နှင့် စွဲ - အကျိုးခံစားခွင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့် sensitivity ကိုလျော့နည်းစေခြင်းက ဦး နှောက်၏ထိန်းချုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလွှမ်းမိုးရန်ပရိယာယ်ပြုသည်
အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ Functions များ:
အခြားအမျောက်ဝံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူသားများတစ်ဦးအားအပိုင် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီး prefrontal ဒေသ။ စိတ္တဇအတွေးအခေါ်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတာဝန်ခံသည်အပြုအမူကိုထိန်းညှိရန်လည်းတာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ပconflictိပက္ခဖြစ်စေသည့်အတွေးများကိုဖျန်ဖြေခြင်း၊ အမှားအမှန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရလဒ်များကိုခန့်မှန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤ ဦး နှောက်areaရိယာသည်လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ prefrontal cortex သည် ဦး နှောက်စင်တာဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အာရုံမှတစ်ဆင့်အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်ပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သိစိတ်၊ အထွေထွေဉာဏ်ရည်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာစသောလူ့အရည်အသွေးများတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်သည်။
အဆိုပါတာဝန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ prefrontal cortex အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်လုပ်ဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို:
ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တွန်းအား / လိုချင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသိအမြင်များအကြားအာဏာချိန်ခွင်လျှာ (ညာဘက်သို့ပုံ) ထားရှိသည်
Hypo ပုံမှန်ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်လစ်လပ်ဆိုလို။ တိုကျရိုကျ ယင်းကိုရည်ညွှန်းသည် တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, ဒါမှမဟုတ် prefrontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး။ စည်းကမ်းချက်များတနည်း တိုကျရိုကျ cortex or prefrontal cortex လည်းအသုံးပြုကြသည်။ သို့သျောလညျး cortex မီးခိုးရောင်ပုံပေါ်သောသိပ်သည်းထုပ်ပိုးအာရုံကြောဆဲလ်များ၏အပြင်ဘက်အလွှာကိုရည်ညွှန်းသည်။ Hypofrontailty ထိုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးစွမ်းဆောင်ရည်အောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ, ဒီအဖြစ်တငျပွ:
အတွင်းကျဆင်း မီးခိုးရောင်ဆိုရင်တော့ Matter (အဆိုပါ cortex)
ထူးခြားသော အဖြူကိစ္စ (ထိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း)
ဇီဝြဖစ်လျော့ကျသည် or လျှော့ချဂလူးကို့စအသုံးချ
ရိုးရှင်းစွာအထား, စွဲ-related hypofrontality အဖြစ်တငျပွထားတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကျဆင်းမှုသည်:
drives, Impulses သတင်းပို့နှင့်တဏှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးနှောက်-ဆင်ခြင်ခြင်းနိုင်စွမ်းတိုက်ရိုက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်း၏ဘယျလိုမှမရှိကြပေ။
စိတ်ကို, ဆုလာဘ် overvalues ​​အန္တရာယ်တန်ဖိုးထားဖို့ပျက်ကွက်နှင့်ရြောကျမညျ့အန်တရာယျ၏သတိပေးကြောင်းစနစ်များကို activate လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်။
မကောင်းသောအကျိုးဆက်များကိုမသိနားမလည်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်သည်လူတစ် ဦး ၏စွဲလမ်းမှုကို“ ထိုက်တန်သော” အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုမှားယွင်းစွာစီရင်သည်။
စွဲလမ်းသူတစ် ဦး အတွက်မူ၎င်းသည်စွမ်းအားမညီမျှမှုဖြစ်သည်။ အားနည်းသောမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်များ (hypofrontality) သည်အလွန်စွဲလမ်းစေသောလမ်းကြောင်းများနှင့်တန်ဖိုးဖြတ်လာသောလိုင်းများမှတွန်းအားများကြောင့်လွှမ်းမိုးနေသည်။ တနည်းအားဖြင့် - သင်၏ စိတ်စွမ်းအင် ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်သိရသည်။
အဘယ်အရာကို Hypofrontality စေတယ်?
လက်ျာဖို့ရိုးရှင်းသောဆုလာဘ် circuit ကိုဆနျးစစျခွငျးသို့မဟုတျ ဒီကိုယ်စားပြုမှု။ circuit သည်မူလ ဦး နှောက် (VTA) အတွင်းတွင်နက်ရှိုင်းစွာစတင်ပြီး prefrontal cortex သို့သွားသည်ကိုသတိပြုပါ။ အဓိကအချက်မှာ VTA သည် prefrontal cortex ထောက်ပံ့သော dopamine ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပျက်အဖြစ်, ကျဆင်း dopamine နှင့် dopamine D2 receptors ကြောင်းယုံကြည်ရသည် desensitization, ဆိုးရွားစွာ အဆိုပါ prefrontal cortex ထိခိုက်စေ။ , ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူကိစ္စမီးခိုးရောင်အမှုဆုံးရှုံးခြင်း, ဇီဝြဖစ်လျှော့ချနှင့်အကျိုးကိုစနစ်နှင့်ယင်း prefrontal cortex အကြားပြောင်းလဲဆက်သွယ်မှု: နောက်ဆုံးတော့ desensitization စွဲနှင့်အတူဆက်စပ်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 150 ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ အင်တာနက်ကိုစွဲအတွက် hypofrontality ၏သက်သေအထောက်အထားများ (ပြောင်းလဲ prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာ) တွေ့ပြီ။
စွဲ-သွေးဆောင် hypofrontality နောက်ပြန်ဆုတ်
desensitization hypofrontality နှင့်အားပျော့ willpower မှဦးဆောင်လျှင်, ဆုလာဘ် circuitry sensitivity ကိုနှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ reboot ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ-porn, porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှသင့်ဦးနှောက်တစ်ကြွင်းသောအရာပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အများစုကယောက်ျားတွေပပျောက်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်သူတို့ရဲ့ reboot ကာလအတွင်း orgasm လျှော့ချပေးပါတယ်။
အချိန်ကအကောင်းဆုံးပျောက်စေတော်မူ၏, ဒါပေမယ့်သင်သည်အဘယ်သို့ နိုင် ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကူညီကြဘူး လေ့ကျင့် နှင့် တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်မျိုးလုံးတိုးပွါးသောတဦးတည်းအရာဖြစ်ပါသည် dopamine နှင့် dopamine receptors ။ - hypofrontality နှင့်ဆက်စပ်သောသော။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကိုအဝလွန်စေသည် ကလေးများ။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုတိုကျရိုကျ cortex ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာ encapsulate တစ်ဝေါဟာရကိုအသုံးပြုမှုဖြစ်ပြီး, အဝလွန်ခြင်း hypofrontality မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းကိုယ့်mproves ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေ အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာပြောင်းလဲနေစဉ်။ ဒါ့အပြင်လေ့ကျင့်ခန်း မတရားသောလျော့ကျစေပါတယ် နှင့် စိတ်ကျရောဂါလျှော့ချပေးခဲ့။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရဘာဝနာသည် dopamine ကို ၆၅% တိုးစေသည်ဟုဆိုသည်။ နောက်တစ်ခု လေ့လာချက် ရေရှည်ဘာဝနာအတွက် ပို. တိုကျရိုကျ-cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာရေးလည်းပြသ ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး နိုင် dopamine တိုးမြှင့် အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် အရက်သမားအတွက်စားသုံးမှုလျှော့ချ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရဆိုရင် prefrontal cortex ကိုကြွက်သားတစ်ခုလိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်။
အဆိုပါ prefrontal cortex ၌ကျိန်းဝပ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူပြည်သူ့ဆင်းရဲသားကိုအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဆောင်နေမှတ်ဉာဏ်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရှိသည်။
သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီသည့်နည်းစနစ်များ
ဒေါက်တာမာ့ခ် Schwartz ဖွငျ့ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆွေးနွေးချက် Watch သူ rewiring အတွက်အခိုင်အမာရနိုင်သောအရာကိုသုံးသပ်ပြီးနှင့်အချက်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကနေအများဆုံးအကြိုးရှိစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်ညွှန်ပြပေးသောအန္တရာယ်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်။
သငျသညျ compulsive အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေ disconnect အဖြစ်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်များကနှိုးဆွဖြစ်လာမှ Rewiring, ကျန်းမာရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တင်ဆက်မှုကိုအခြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအကြားကျန်းမာဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖော်ပြသည်။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင်: ငါ rewire နိုင်ရန်အတွက်လိင်ရှိသည်ဖို့ရှိပါသလား?
Rewiring သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်သင်၏တုန့်ပြန်မှုကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်လည်းရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြိုးစားနိုင်သည် ဒီ technique ကို, Doidge ရဲ့မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်။ ဒေါက်တာဂျက်ဖရီ Schwartz OCD လူနာတွေအတွက် technique ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သော်လည်းသူ compulsive အမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ (OCD နီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည် အကျိုးကို circuitry နှင့်ဆက်စပ်သော နှင့်၎င်း၏ dysregulation ။ )
သင့် ဦး နှောက်အားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ကုသခြင်းသည်အချိန်ယူရသည်
တနည်းကား, လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကိုအချိန်-မှီခိုသည်။ အဘယ်သူမျှမ PMO လောက်ခြောက်ပတ်အတွင်းအပြီးတဦးတည်းကောင်လေး said:
ဒီနေ့ငါနားလည်လိုက်တာကလိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုငါ့ခေါင်းပေါ်သို့ပစ်လိုက်သောအခါငါပြန်ဖွင့်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပုံရိပ်သည်အလွန်အားကောင်းနေသည်နှင့်အမျှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်နှင့်ဖယ်ထုတ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ပုံတစ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းထဲသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်ထုတ်ပစ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးကြာရှည်စွာမနေပါ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ရဲ့ဒီပုံတွေကိုပေးပို့နေတဲ့ပုံဟာအားနည်းနေသလိုခံစားရတယ်။
အဆိုပါအလေးပေးသောအရာကိုသင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ပါသည် do, မခွဲခြားဘဲသင်မည်သို့ ခံစားချက်။ တနည်းအားဖြင့်သင်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဖြစ်စေကာမူ၊ သင်သည်သင်၏ဟောင်းနွမ်းသောအကျင့်ဟောင်းသို့ပြန်မလာပါကသင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။
သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုဖြစ်စဉ်အမြန်နှုန်း။ တစ်ခုမှာကောင်လေး said:
တကယ်တော့သင် rewiring ကိုသတိရှိရှိပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစောင့်ဆိုင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ ၁၀၀% အကုန်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုချက်ချင်းမကျေနပ်ရင်တောင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အလေ့အကျင့်အသစ်တွေမှာပါဝင်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးတာကောင်းတယ်။ ။
porn စွဲနေတဲ့လေ့လာသင်ယူအပြုအမူဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုဒီတော့ထွက်စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ပျင်း, အထီးကျန်ဆန်ခြင်းနှင့်တစ်ခုအလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်အဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုနားမလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတတ်ပြီး, အချိန်များအတွက်တင်းကုပ်သပိတ်ကြည့်ဖို့အခါ။ သင်အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့်ရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်သင့်ကိုချက်ချင်းအာရုံပျံ့လွင့်ပါစေဟုသင့်ကိုယ်သင်ပြောပါ ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့သင်၏အာရုံကိုလှည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အသက်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခု၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကျန်းမာသောသရေစာလုပ်ခြင်း၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တေးဂီတအချို့ကိုတင်ခြင်း၊ သင်၏အတွေးများကိုဂျာနယ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရေအေးသောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လိင်အင်္ဂါများကိုရေထဲ၌ရေဆေးခြင်းဖြင့်ဆေးခြင်း။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်မည့်အစားသင်ချက်ချင်းလုပ်နိုင်သကဲ့သို့အလိုအလျောက်လုပ်နိုင်သလောက်အရေးမကြီးပါ။ တတ်နိုင်သလောက်မကြာခဏပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။
အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သင်ဟာအခြားရွေးချယ်စရာတခုကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ မြင်နိုင်စွမ်းအား” ကိုကြည့်ပါ။
တကယ်တော့သင့် ဦး နှောက် rewiring
ပထမဦးဆုံးမှာအခြားရွေးချယ်စရာလှုပ်ရှားမှုမှလှည့်အလိုတော်တစ်ဦးအားကြီးသောလေ့ကျင့်ခန်းမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသတိရှိရှိတစ်ခုခုရန်သင့်အာရုံစိုကျသောအခါသို့သော်ကအနာဂတ်၌နောက်တဖန်သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလှည့်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပေါက်နေသည်။ သင်အမှန်တကယ်သင့်ဦးနှောက် rewiring နေကြတယ်။ သငျသညျကွာသင့်ရဲ့မတရားသောမှသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖွင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သင့်ကိုရှေးခယျြလှုပ်ရှားမှုဆီသို့, သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ထဲမှာသစ်ကိုလမ်းကြောင်းကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုအားနည်းစေ။
ငါသတိပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ Flashback များသည်အစောပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းက porn အတွေ့အကြုံများမှဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝမေ့လျော့သောများစွာသော ၎င်းသည်အလွှာများကိုပြန်လည်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တူသည်။
porn မှ hypersensitivity ရှိနေဆဲဟု
မှတ်ချက် - porn porn အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူနှင့်သူ၏ ဦး နှောက်သည် porn နှင့်ဆက်စပ်သည့်မည်သည့်အချက်ကိုမဆိုအလွန်ကြာရှည်စွာနှင့်အကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုတာကပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတစ်ခုကတောင်သင့် ဦး နှောက်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုအဟောင်းကိုသက်ဝင်စေပြီးအတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခကိုတိုးပွားစေနိုင်တယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ပါ။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်နေသည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်“ ကြည့်ရုံ” ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရန်တိုက်တွန်းမှုကိုတွန်းလှန်ပါ။
သင်၏အတွေးများကိုညစ်ညမ်းမှုမှဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ငါပြန်ရောက်သွားတယ်သို့မဟုတ် relapse ၏အန္တရာယ်ဖြစ်၏။ ယခုအဘယ်သို့နည်း,"
ယောက်ျားတ ဦး သည်စွဲလမ်းမှုမှတစ်ပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပုံမှန်တိုက်တွန်းမှုနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သည်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဟာလေကိုမချန်ခဲ့ရုံတင်မကဘူး၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်အရမ်းလွဲသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသဖို့လိုခဲ့တယ်။ အဲဒီအစားလိင်စွမ်းအင်တွေအများကြီးကကျွန်မကိုဖြတ်သန်းနေတုန်းထွက်ပြေးဖို့လိုနေသလိုပဲ၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဒီအားစိုက်ထုတ်မှုကိုငါတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုအသေးအဖွဲထိတွေ့မှုနဲ့ညမှာစာရွက်တွေပွတ်တိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းချိုလာစေပြီးနှစ်ရက်ကြာတော့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အယူအဆကောင်းတစ်ခုနှင့်ပိုတူလာသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းသည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
သင်၏လိင်တံသည်တံခါးပေါက်တစ်ခုထက်ပိုဆိုးနိုင်သည်၊ သို့သော်လှပသောအမျိုးသမီးများသည်ထိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့်သင့်ကိုချက်ချင်းနှိုးဆွစေမည့်အကြံအစည်သည်စစ်မှန်သောဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ လိင်စွမ်းအင်အတွက်မှားယွင်းရန်လွယ်ကူသည်။ ယခုငါခြားနားချက်ကိုငါသိ၏။
ပိုများသော rewiring နည်းစနစ်
အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ဦးနှောက်သုတေသန (2014)
လေ့ကျင့်ခန်းအလုပ်အမှုဆောင်ရာထူးအမည်နှင့်အောင်မြင်မှုကိုပိုကောင်းစေနှင့်အဝလွန်ကလေးများအတွက် ALTER ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: ကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ် (2011)
Rewiring နှင့်ဦးနှောက်အပေါ်အသုံးဝင်သော infographics